Ahoana ny fomba hahazoana alika roa hifanaraka | Tontolo alika
Indraindray isika mieritreritra ny hampivelatra ny fianakaviana amin'ny alàlan'ny fananganana alika hafa, fa ny mpiara-miasa amintsika ankehitriny dia mety tsy mandray tsara azy io. Izany no antony tsy maintsy hitadiavanao ny sasany torohevitra hampifanarahana alika roa. Misy ny lesoka ataontsika nefa tsy fantantsika izany, ka miteraka toe-javatra mety mandeha tsy mandeha tsara.
Mba hialana amin'ny herisetra mety hitranga na fitondran-tena tsy mendrika amin'ny alika, dia mila jerena ny antsipiriany sasany. Manana tombony isika fa efa fantatsika ny biby fiompintsika mahazatra, ny heriny ary ny fihetsiny miaraka amin'ny alika hafa, hahafantarana raha hanaiky ny tsara kokoa na ny ratsy hafa izy ireo ao anaty fonosana.
La fampidirana Tena ilaina izany mba tsy hanombohan'ny alika fifandonana. Ny iray amin'ireo lesoka lehibe natao dia ny fampidirana an-trano ilay biby fiompy vaovao, izay faritany efa fantatry ny alikanay ho azy, ary matetika izy no miaro amin'ny olon-tsy fantatra. Izany no antony tsy maintsy hitondrantsika azy ireo ho amin'ny tany tsy miandany. Mivory amin'ny zaridaina ary ampahafantaro azy ireo.
Ny alika dia mahay manao fiarahamonina raha efa zatra izany isika, ary fantatr'izy ireo ny fomba mampahafantatra ny tenanao amin'ny alika hafa, noho izany dia tsy maintsy eo ihany isika hisorohana ny toe-javatra tsy ho ratsy. Zava-dehibe koa ny toe-tsaintsika. Raha mahita antsika mitebiteby ny alikanay, dia hatahotra koa izy, noho izany dia tsy maintsy asehontsika fa milamina sy milamina isika, ka ampitaintsika amin'izy ireo izany fiarovana izany mba hahafantaran'izy ireo fa ara-dalàna ny toe-draharaha.
Rehefa tsikaritray fa efa nifankahalala sy nifankazatra izy ireo dia ho avy izao ento mody izy roa. Tany hitan'ny alika ho azy io, ary anjarantsika ny maneho fa isika no tompon'andraikitra ary samy mila mizara ny habaka. Tsy maintsy ialantsika ny fihetsika saro-piaro na mahery setra an'ny alika, ka ny andro voalohany dia tsara kokoa ny tsy mitandrina bebe kokoa amin'ilay alika vaovao, aza manadino azy bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hifanarahana alika roa
Fa maninona ny alikako no mivonto molotra?
Ahoana ny fomba hisorohana ny gripa amin'ny alika